Vaovao - Fanaraha-maso ny mari-pahaizana momba ny milina amin'ny lathe CNC amin'ny famokarana
Ny fiantraikan'ny fahamarinan'ny famolavolana CNC dia matetika noho ireto antony maromaro ireto: ny iray dia ny antony ara-pitaovana, ny faharoa dia ny olana amin'ny fitaovana, ny fahatelo dia ny fandaharana, ny fahefatra dia ny hadisoana amin'ny benchmark, androany ny teknolojia milina Wally ary milazalaza fohifohy momba ireo ianao lafiny.
1. Ny fahamendrehan'ny machining an'ny lathe CNC nateraky ny fitaovana dia matetika vokatry ny hadisoan'ny rafitra an'ilay milina ary ny lesoka nateraky ny fihazakazahan'ny fitaovan'ny milina. Amin'ny dingan'ny fampiasana ny fitaovana milina, ny singa fototra toy ny visy firaka dia mitafy, miteraka ny fitomboan'ny banga, ary ny lehibe kokoa amin'ny hadisoan'ny fitaovana milina, izay hisy fiantraikany amin'ny fahamendrehan'ny milina CNC lathe;
2. Amin'ny fizotry ny fanodinana lathe NC dia tena zava-dehibe ny fisafidianana ny fitaovana fanapahana. Fitaovana tsy mety dia hitarika amin'ny enta-mavesatra avo loatra sy ny fitafiana fitafiana haingam-pandeha, izay hitarika amin'ny fametahana ny latina CNC tsy afaka mahafeno ny fepetra takian'ny vokatra;
3. Ny masontsivana fanapahana tsy mitombina napetraka mandritra ny fandaharana dia iray ihany koa amin'ny antony tsy ahazoana antoka ny fahamendrehan'ny milina CNC lathe. Ny masontsivana fanapahana ny fahana sy ny revolisiona dia tsy maintsy apetraka amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fitaovana, ny toetra mampiavaka azy ary ny fitaovana, mba hiantohana ny fahamarinan'ny milina amin'ny lathe CNC;
4. Amin'ny fizotran'ny fanodinana lathe NC, ny hadisoan'ny datum an'ny vokatra dia iray ihany koa amin'ny antony tsy mahafa-po ireo fepetra takiana amin'ny milina CNC. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fihodinana sy ny fikosoham-bary, ny fotoana fametahana dia azo ahena araka izay tratra, izay afaka mampihena ny fitarihan'ny fanodinana faharoa amin'ny fahamendrehan'ny latina CNC ateraky ny fiovan'ny datum.
Ny atiny etsy ambony dia ny teknolojia milina volley ho an'ny tsirairay hizarana ny lohahevitry ny mari-pahaizana momba ny milina lathe CNC, manantena ny hanome ny masinina milina CNC.